रुखको छहारी लिन पुगेका बाबुरामले किन हँसिया हथौडा बोकेनन् ? « Himal Post | Online News Revolution
रुखको छहारी लिन पुगेका बाबुरामले किन हँसिया हथौडा बोकेनन् ?
प्रकाशित मिति : २०७४, १ कार्तिक १६:५८
काठमाडौँ । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका बीच चुनावी तालमेल र पार्टी एकताका लागि सँगै आएका नयाँ शक्ति नेपालका नेता डा.बाबराम भट्टराई अन्ततः रुखको छहारी लिन पुगेका छन् । एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाएर साम्यवाद ल्याउनुपर्ने बताउने बाबुराम वाम गठबन्धनबाट बाहिरिएपछि धेरै प्रश्न उब्जिएका छन् ।
गोरखा क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचन लड्न नपाएपछि वाम समिकरण छोडेका बाबुराम अहिले कांग्रेसको रुखमा ओत लाग्न पुगेका छन् । कांग्रेससँग तालमेल गर्नुअघि उनलाई वाम गठबन्धनबाटै चुनाव लड्न दिनुपर्ने आवाज नउठेको पनि होइन । बाबुरामले गोरखा २ मा लड्न वाम गठबन्धनबाट किन टिकट पाएनन् त ? धेरैको चासोको यसबारेमा माओवादी केन्द्रकै एक नेता (नाम गोप्य राखिएको छ) ले केही तथ्य खोलेका छन् ।
कुनै बेला बाबुरामनिकट मानिने ती नेताले बाबुरामले वाम गठबन्धन छाड्नुमा उनकै कम्जोरी रहेको रहस्य खोले । ‘एमालेसँगको तालमेलमा गोरखाका दुवै निर्वाचन क्षेत्र माओवादीको भागमा परेका छ, उहाँले सूर्य चिन्ह लिएर लड्ने भन्नुभयो, हामीले हँसिया हथौडा लिनु भन्यौं’, ती नेताले जनता समाचारसँग भनेका छन्, ‘उहाँले हँसिया हथौडा चुनाव चिन्ह लिएर लड्न मान्नु भएन, बरु रुख लिएर लड्न तयार हुनुभयो ।’
जनयुद्ध र शान्तिप्रक्रियापछि पनि बाबुरामसँग नजिक भएर लामो समय काम गरेका ती नेता उनको व्यवहार दुःखी भएको बताउँछन् । ‘अब बाबुरामबाट जनताले आश नगरे हुन्छ,’, उनले भने, ‘मैले पहिले नै आश मारेर छाडेको थिएँ ।’